Imigomo nemibandela yokusetshenziswa -
Imibandela nemibandela yokusebenzisa
IMIBHALO NEMIBHALO YOKUSETYENZISWA KWE KONGOLISOLO
ethandekayo KONGOLISOLOIS & KONGOLISOLOISE!
I. Imithetho yangaphakathi KongoLisolo kudinga ukuhlonipha kanye nokuhlonipha bonke abahlanganyeli kule nkundla (iwebhusayithi).
Yiqiniso, KongoLisolo ihlinzeka ngemithetho yangaphakathi kubo bonke abasebenzisi be-inthanethi okumele bahlonishwe yibo bonke.
Ngokuhlanganyela kuwo KongoLisolouyavuma ukulalela imithetho engezansi.
1. I-FORUM (GROUP) KongoLisolo Ikhumbuza amalungu okulandelayo:
A. Iforamu yokuxoxisana KongoLisolo Uhlu olwenzelwe phezulu luvumela ukushintshwa kwayo yonke imininingwane ethinta ngqo i-Afrika ngqo noma ngokungaqondile. Ukubhaliswa kwewebhusayithi (iforamu) kungumuntu ngamunye futhi kumahhala…
KULULAZIWE ukudala igama lomsebenzisi elingaphezu kwelilodwa. Lokhu kuyadida amanye amalungu futhi akusizi ekwakheni umphakathi othembekile.
B. Njengasekuqaleni, KongoLisolo ihlala (iwebhusayithi) isithangami sokukhulumisana samahhala. Ngale njongo, noma yikuphi ukushicilelwa okungasuki kumphathi wenkundla (yewebhusayithi), kwenza umbhali wayo kuphela.
C. Ukushintshana kwemibono nokuphawula kumele kwenziwe ngenhlonipho nangokuhloniphana.
D. Izithombe ezinyanyekayo nezonakalisayo ngeke zibekezelelwe.
E. Futhi asikuvumeli ukuhlambalaza, inzondo, ukuhlambalaza, ukucwasa ngokwebala, ukubandlulula, ukubandlulula, izithombe zobulili ezingcolile, ukweyisa, ukuthuka, ukunyundela noma ukusongela inhlamba.
Awukwazi ukuthumela okuqukethwe okungahambisani, okugxekayo, noma okwehlisa ilungu le KongoLisolo. Leli bhulogi (iwebhusayithi) lenziwe ukwakha hhayi ukubhubhisa, ukuhlanganisa nokungahlukanisi.
2. ulimi Akunazithiyo zolimi ku KongoLisolo, Kepha kungcono ukusebenzisa izilimi ezikulo KongoLisolo (IZILIMI ZEZ19) ukuqonda wonke umuntu!
3. IMISEBENZI NE-VIDEOS POSTS
A. Sicela uqaphele ukuthi ungathumeli umlayezo ofanayo izikhathi eziningi.
B. Wonke amavidiyo athunyelwe kwi-website ye-website KongoLisolo akudingeki kudlule imizuzu engu-10Kodwa uma ifundisa, ingahamba kuze kumaminithi we-15!
4. AKUKHO UKUQALA OKUNGENZISWA NGAYO
Awukwazi ukuthumela noma yikuphi okuqukethwe ngezinhloso zezohwebo (ukudayiswa kwezihloko, ukukhangisa ...).
Lokhu kufaka phakathi ukukhangisa kwebhizinisi lakho siqu. Izicelo ze-charity, raffle noma imincintiswano, ukuthumela ama-banner banners, ukucela kwezimpahla noma amasevisi kanye / noma ugaxekile kuvunyelwe esithangamini.
EUkungezelela, awukwazi ukucela izimali, abakhangisi noma abaxhasi, futhi awukwazi ukukhuthaza "imipiramidi" noma uhlelo olufanayo ngoba, ngeshwa, akunakwenzeka ukuqinisekisa ubuqiniso benkampani ngayinye ecela iminikelo; Ngakho-ke, ukuze uvikele KongoLisolokuyinto futhi KongoLisoloukukhwabanisa, kumele sikwenqabe ukucela izinhlangano zokusiza.
5. AMALUNGU: Amalungelo nenkululeko
A. Noma yiluphi ilungu le KongoLisolo ujabulela inkululeko eyisisekelo yesazela, umcabango, inkolelo, umbono kanye nokukhuluma.
B. Wonke amalungu unelungelo lokuhlonipha impilo yakhe yangasese, udumo lwakhe, isithunzi sakhe nokuphepha komuntu wakhe ...
6. IMISEBENZI YOKUQALA
Kuzosetshenziswa unswinyo olubhekiswe kuma-recidivists: 2 Isexwayiso, khona-ke uzovinjwa (WEBSITE) IFUMU
A. Uma unomuzwa wokuthi ilungu lephule imigomo yokusebenzisa noma umthetho we KongoLisolo noma uma ukholelwa ukuthi obambe iqhaza uziphatha ngendlela engafanele, sicela usazise ngokuchofoza kusixhumanisi: Abathengi @kongolisolo.co
B. Uma ngabe sibona ukuthi ilunga elinemisebenzi yakhona noma eyedlule lenza ukwephula imithetho KongoLisolongokushesha futhi nakanjani siyaliphazamisa leli lungu.
Le mithetho KongoLisolo ingashintshwa nganoma yisiphi isikhathi ngabaphathi be KongoLisolo futhi ngaphandle kwesaziso. Noma kunjalo, imithetho emisha izokwenziwa kumalungu KongoLisolo ngesikhathi esifushane.
8. ULWAZI LI-ARM
Sebenzisa umqondo wakho ovamile futhi ube nesikhathi esihle kakhulu KONGOLISOLO Sincoma ukungahambisani okuncane ngoba ASIKHONZISI KULO CABANGANI NOMA INDLELA ONGAVUMA NGAYO, KODWA SIPHENDULA IMIBHALO YAKHO!
I-NB: Iwebhusayithi (Forum), KongoLisolo ihloselwe abantu abavuthiwe futhi ivunyelwe okungenani iminyaka engu-21
ngu: KongoLisolo Administration!